मार्च 26, 2019 मार्च 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments लौकाको जुस
लौका विश्वका प्रायः सबै ठाउँमा हुने तरकारी हो । लौका मानव स्वास्थ्यलाई निकै फाईदाजनक छ । मानिसहरुले लौका भन्ने बितिकै तरकारी मात्र हुन्छ भन्ने सम्झिन्छन् तर लौकाको तरकारी मात्र नभई जुस बनाएर पनि खान सकिन्छ । जसले गर्मी मौसममा शरीरलाई धेरै फाईदा पुर्याउछ । यसका साथै लौका औषधि पनि हो । लौकामा पित्त, कफनासक, रुचिनासक गुण छ । लौकाको जुस ज्वरो, खोकी, मुटुको विकार, गर्भाशय सम्वन्धी सबै रोगको लागि लाभदायक हुने गरेको छ ।
रक्त विकारमा आधा गिलास लौकाको जुुसमा थोरै मिश्री मिलाएर बिहान बेलुका पिउनाले रगतको विकार कम हुदै जान्छ । लौकाको जुस पिउदा यसले शरीर भित्रको टक्शीनलाइ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र शरीरको भित्री भाग सफा राख्ने काम गर्छ ।
२. दाँतको दुःखाई
दातको दुःखाईको समस्या भएमा १ सय ग्राम लौकाको गुदी र २५ ग्राम पिसेको लसुन १ लिटर पानीमा उमाल्ने । आधा नहुञ्जेल यसलाई उमालिरहने । त्यसपछि यसलाई जाली कपडाले छान्ने। छानेको पानीले कुल्ला गर्ने। दिनमा २-३ पटक यसो गर्नाले दाँतको दुःखाई कम हुन्छ ।
५. मुत्र नलीको जलन
मुत्र सम्बन्धि रोगमा लौकाको रस निकालेर एक चिम्टि सिधे नुन र कागतीको रस मिलाएर दैनिक बिहान पिउनाले मुत्रनली खुलेर आउछ र मुत्रनलीको दुःखाई हट्छ । यदी तपाइलाई पिसाब फेर्दा पोल्ने वा दुख्ने हुने गर्दछ भने लौकाको जुस सेवन गर्नुहोस् । पिसाबमा एसिडको मात्रा बडी भएकाले पिसाब फेर्दा समस्या आउने गर्दछ ।
८. ज्वरो, पित्त र बाथ
९. गर्भाशय सम्बन्धि समस्या
गर्भाशय सम्बन्धि समस्यामा लौकाको रस निकै लाभदायक मानिन्छ। पटक पटक गर्भपतन हुने महिलाहरुले लौकाको रस तथा तरकारीका रुपमा अवश्य खान आवश्यक हुन्छ । यसले गर्भाशय मजवुत भई गर्भपतन हुने समस्याबाट छुटकारा दिलाउन मद्दत गर्छ ।
लौकाको जुसमा पाउने फाइबरले पाचन प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउने काम गर्दछ । यसको नियमित सेवनले कब्जियतका बिरामीलाई आराम दिने गर्दछ ।
११. तौल घटाउन मद्दत
लौकाको जुसमा क्यालोरी र चिल्लो बराबर हुँदैन जसमा हुने फाइबरले भोकलाई कम गर्छ जसले गर्दा मोटाउने सम्भावना कम हुन्छ । लौकाको जुसमा क्यालोरी र चिल्लो पदार्थ नगन्य मात्रामा हुन्छ । यदि तौल घटाउने सोचमा काही व्यक्ति छन् भने उनीहरूका लागि जूस उत्तम उपाय सावित हुनेछ । यसमा पाइने फाइबरले भोक कम लाग्छ र शरीरको चिल्लो पदार्थ पनि काट्छ ।
१२. शरिरमा पानीको सन्तुलन कायम
लौकामा ९७ प्रतिशत पानी रहेको हुन्छ । लौकामा पर्याप्त मात्रामा पानीको मात्रा हुन्छ । तपाई बाहिर जान लाग्नुभएको छ भने एक गिलास लौकाको जुस पिएर निस्कुनहोस् । दिनभर तपाईको शरिरमा पानीको अभाव हुने छैन ।
१३. चाँयाबाट मुक्ति
चाँयाले हैरान बनाएको छ भने तपाई लौकाको रसमा अमलाको रस मिलाएर कपालमा लगाउनुहोस् । तपाईलाई चाँयाले सताउन छोड्छ ।
१४. शक्तिको लागि
← ग्रीन-टी पिउनुका बेफाइदाहरु
महिलासँग भुलेर पनि सोध्न नहुने कुराहरु →
4 thoughts on “लौकाको जुसका फाइदाहरु”